အကောင်းဆုံး ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား LED ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား LED စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ကျနော်တို့၏ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်း၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများ, ပစ္စည်းရောင်းသူနှင့်တင်ပို့သောတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား LED။ ငါတို့သည်လည်းကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်အားဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်မှထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့နေကြပါတယ် Taiwan။ ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ပိုင့်အဘယ်အရာကို, ငါတို့သည်လည်း client များလိုအပ်ချက်များအတိုင်းဖန်ဆင်းတော်သောဒီဇိုင်းများများအတွက်စီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်။
ပုံစံ - A2 160W-240W
အတိုင်းအတာ:L412x W372x H360mm
အလေးချိန်:17.၄ ကီလိုဂရမ်(ပါဝါအပါအ ၀ င်)
LED အလင်း Lumens:3600/4800/6000/7200/9600/12000/14400lm(ရိုက်ပါ.5700K)
Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်:IP68，ပါဝါ IP65
CNS ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုအားဖြင့်-အထောက်အထားလက်မှတ်,ထွ DM IIB T5.
ဖုန်မှုန့်ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထားလက်မှတ်,ထွ D A21 IP68 T120℃DB.
လက်မှတ်နံပါတ်: (ISTI)2018 အမှတ်.07-00007X。
အလင်းဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်တူညီခြင်း.အလင်းအနိမ့်သည်မမှန်ကန်ပါ.Ingress Protection Rating IP68 နှင့်သက်တမ်းရှည်သည်.
စိတ်ကြိုက်သံမဏိ adapter,1 နှင့်အတူသုံးနိုင်သည်/၂~၃/၄ NPT-အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအံသွားကိုအသုံးပြု။ သက်သေပြအဆစ်.ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နိမ့်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/explosion-proof-led.html
အကောင်းဆုံး ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား LED ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။